'अछुत' हुनुकाे धर्म : विद्राेह
तिमी जस्ताे मानिस हुनुमा घृणा लाग्छ, मलाई माफ गर प्रिय
मानव- मानवविचको विभेद भोगिरहँदा र अरुले भोगेको देख्दा दिक्क लाग्छ । आफैले आफैलाई बेस्सरी गाली गर्न मन लाग्छ । धिक्कार्न मन लाग्छ । कहिलेकाहीँ आफू जन्मेकोमा धेरै प्रश्न गर्दागर्दै धेरै रुन मन लाग्छ । यो समाज अनि अछूतको उपमा पाएकी म। थाहा छैन यो कस्तो किसिमको उपमा हो जसले दिनरात पीडा दिईरहन्छ , तड्पाईरहन्छ अनि कहिलेकाहीँ पछुताे लाग्छ मान्छे हुनुमा । नेपाली हुनुमा गर्व हाेइन् अभिषाप लाग्छ ।
बुद्धले भनेका छन् मानिसकाे श्रेणी जन्मले हाेइन कर्मले छुट्टीन्छ । म समाजको एक सहिष्णु सदस्य । नेपालको एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक हुँ। पृथ्वीरुपी सुन्दर बगैंचाको एक जिम्मेवार माली हुँ। एक स्वाभिमानी नेपाली हुँ । पुर्खादेखि हामीसम्म सबैले जुन विभेदको मार खेपिरहेका छौँ अब त्यो हुनुहुँदैन । यस्तो अमानवीय व्यवहारलाई अन्त गराउन लाग्नैपर्छ। समयले हामीलाई कुरीकुरी भनिरहेकाे छ ।
अब चुप लागेर बस्नुहुदैन किनकी म मेरा पुर्खाहरुको सपना साकार पार्ने वर्तमानको एक सक्षम सारथी हुँ। मेरो पुर्खालाई पनि यो विभेद त पक्कै पनि मन परेको थिएन तर गरिबी र अनपढको कारण सहे उनीहरुको त्यहि विगतको राम्ररी विचार गरे र अब मानवरुपी समुदायको आकृती कोर्नु छ पुर्खाहरुको ईज्जतलाई स्थिर राख्दै विभेदको खाडल पुर्नुछ। भविष्यका सन्नतिलाई जीवनको बाटो देखाउनु छ। मैले एक असल परिवार ,समुदाय र राष्ट्रको निर्माण गर्नुछ र यश धर्तीको जगेर्ना गर्नुछ।
यी कुराहरु म एउटा शिक्षित र ईमान्दार नागरिकको कर्तव्य पनि हो तर बुझ पचाउने यो ब्राह्मणबादी समाजमा कर्तव्य निभाउन गार्‍हो छ।
अझैपनि कथित दलितहरु धारा पधेँरामा पानी लिन जादा अलग्गै बसेर पानी थाप्नुपर्ने स्थिती थथावत छ। एउटै ईश्वरका सन्नती पनि धार्मिक स्थलमा उपस्थिति भएर आस्थाका फूलपाती चढाउन पाएका छैनन् । दुःख लाग्छ एक्काईसौँ शताब्दीमा आईपुग्दा पनि मैले र मेरो समुदायले भोग्नुपरेका विभेदका पीडाहरु बनेका घाउका खटिरा देखाईरहनुपर्दा। यो सबै हाम्रो विवेकको कमजोरी र चिन्तनको दरिद्रताले नै सिर्जना गरेको परिणाम हो।
वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दा मेरो समुदायका धेरै व्यक्तिहरु शिक्षित नभएका पनि होइनन् तर आफ्नो अवस्थाको कारण कोही विदेशीए, कोही मानवको व्यवहार पाउनकै लागि आफ्नो जात ढाटेर जिविका चलाईरहन बाध्य छन् भने कोही उपल्लो जात भनिनेसँग मानवको दर्जाको लागि विवाद गरिरहेका छन्। यस्तै छ यहाँ जति धेरै आफूलाई विद्वान् सम्झेपनि, छुवाछूत हट्यो भनेपनि, जुनसुकै क्षेत्रमा लागेर प्रगतितिर लम्किरहेपनि दलितहरु कुनै न कुनै रुपमा छुवाछूतको विभेदकारी व्यवहार खेपिरहेकै छन्। काम गर्दै जादा कुनै मोडमा खुसी लाग्छ अब समानता भएछ भनेर तर कतै अरुले त कतै आफूले भोगेका र भोग्न परेका छुवाछूतको घटनाले मन छियाछिया हुन्छ । त्यसैले कहिलेकाहीँ पछुताे लाग्छ मान्छे हुनुमा । नेपाली हुनुमा गर्व हाेइन् अभिषाप लाग्छ ।
एैन कानुनले जातभात र छुवाछूतको अमानवीय कुप्रथालाई निराकरण गरेको आधा शताब्दी बितिसक्यो तर अझै पनि वल्ला घरको रामे दमाईले पल्लो घरका पुरेत बाको मझेरी देख्न पाएको छैन। कोदाली र हसिया बोकेर साहेबको घर पुगेको बलबहादुर कामी उपेक्षित भएर आँगनको पल्लो छेउमा जुठ्याननेर बसेर जाउलो खान बाध्य छ । श्यामे सार्की पनि यो विभेदबाट पर हुन सकिरहेको छैन। नियतिले ठगेका हाम्रा विधुवा तथा वृद्ध आमाहरुलाई यही समाजले अभद्र व्यवहार गरिरहेको छ। जनप्रतिनिधीहरु नै दलित भएकाै कारण सहिद हुनुपरेकाे छ । कार्यपालिका सदस्यनै सदनमै अपमानित हुनुपरेकाे छ । त्यतीी मात्रै कहाँ हाे र छुवाछूत प्रथालाई अन्त्य गर्न अभियान शुरु गरेका ७६ वर्षीय टङ्कप्रसाद आचार्य बहिस्कारमा परेकाे सारङ्गी न्युजले आजमात्रै समाचार लेखेकाे छ । याे कहिले सम्म ?
२१ ‌अौँ शताब्दीसम्म आईपुग्दा पनि मेरो समाज छुवाछूतको कुधारणाबाट अझै मुक्त हुन सकिरहेको छैन। युरी गागरीनले अन्तरिक्षको यात्रा गरेको आधा शताब्दी हुन लागिसक्यो , निल आर्मस्टङले चन्द्रमामा पाईला राखेको चार दशक बित्न लागिसक्यो, मानिसले चन्द्रमामा खेती गरि फर्किए तर मेरे समाजले चन्द्र सूर्यलाई भगवान मान्छ ढेगी बस्छ । समाज ढेगी छ । सरकार दलाली गर्छ । अवसरबादी विचारहीन र अदुरदृष्टी नेतृत्व छ । नागरीक समाज मुखमा पिडाँलु हाली बस्छ । जनताकाे माखे मार्ने उपती छैन् । (माखे मार्ने विष पनि भारतबाट आयत हुन्छ ) दलित नेता र नेतृत्वके अवस्था र आन्देलनकाे कार्यदिशा हेर्दा जता जता बाहुन बाजे उता उता स्वाहा ।
उसाे भए के दलित मानिस हाेइन् । सायद मानिस हुन निमुखाकाे पेटमा छुरा हान्नु पर्थयाे । सुन्दर सपनाकाे बलात्कार गर्न सक्नु पर्थयाे तर आफै राताेदिन बालात्कृत छन् । निमुखा र निरिह छन् । कसरी मानिस हुनु । मानिस हुन के गर्नु पर्ने ? हत्या गर हिँसा गर नाबालक बालिका बलात्कार गर वा गुण्डा गिरी गर नत्र कसरी मानिस हुनु । मलाई तिमी जस्ताे मानिस हुनुमा घृणा लाग्छ ।
के यो समाज विकास तथा परिवर्तनमा दलित समुदायको योगदान केही छैन त ? देश निर्माण र पहिचान स्थापित गर्नमा हाम्रो पनि कुनै त्याग र बलिदानी छैन् ? इतिहासकाे सहि र निर्मम समिक्षा गर्नेहाे भने दलित समुदायकाे योगदान अनुपम रहेको छ तर पनि हामीलाई सधैँ महत्त्वहीन किन बनाइएकाे छ । समयले त्यसकाे हिसाव किताब गर्ने छ ।
होसियार दलित आन्दाेलन र मुक्तीकाे नाममा दलितलाई नै झन कंगाल बनाउने सुकिला मुकिलाहरु (दलित) अव समयले तिमीले गरेको हर्कत र ज्याजतीकाे एक एक हिसाव गर्ने छ । तिमीलाई त थाहा नै हाेला जति दाबायाे भकुण्डाे उति उफ्रिन्छ भन्ने । साथी हिरण्यकस्तुपकाे कथा जस्तै तिम्रेा पनि हालत नहाेला कसरी भनुँ । माफगर साथी मैले तिमीलाई मान्छे बनाउन गरेकाे त्याग र तपस्या अव पुरा भएकाे छ । युगाैँदेखी तिमीले गरेकाे अन्याय र अत्याचार विरुद्ध सडकमा आउनु र विष्फाेटित गर्नुकाे अर्काे विकल्प मैले देखीन् । मलाई माफ गर साथी । म आन्दाेलनमा हेलिएकी छु । विद्राहमा लागेकी छु । पहिचानकाे अर्काे नाम विद्राेह पनि त रहेछ ।
लेखक गैरेका यी निजी विचार हुन् ।
बिहिवार, भदौ ५, २०७६, ०२:०८:००
महिला हिंसाकाे पराकाष्टमा दलित महिला
फ्रायडीय चिन्तन : मानिस कसरी बलात्कारी, अपराधी र हत्यारा बन्छ ?
माया एन्जोलो : प्रेमले कुनै बन्धन चिन्दैन !
कहिले बुझ्ला याे समाज: महिलाका मर्महरु ?
महिला हिंसाको अन्त्य कसरी ?
मंसिर १०, २०७६ सारङ्गी न्यूज
नवउदारवादको चङ्गुलमा कसरी फस्यो लोकतन्त्र ?
सिन्धुपाल्चोक बस दुर्घटना (अपडेट): मृतकको संख्या १४ पुग्यो, दर्जन बढी घाइते मंसिर २९, २०७६